Malunga nathi -Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd.
Ikhebula le-Hybrid ye-Optical
Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd.
Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd.ise Chengdu Hi-Tech yesithili (zone entshona). Yenziwe liZiko lesiHlanu loPhando lwezePosi kunye noNxibelelwano (i-FRIPT), eliqale ukubandakanyeka kuphando kunye nophuhliso lwentambo yanamhlanje kunye nethekhnoloji yonxibelelwano eTshayina ukusukela ngo-1970.
Unyaka wonke, sivelisa: ibhokisi ye-lan ye-lan, i-80000km coaxial cable kunye ne-3.5 yezigidi zeekhilomitha ze-fiber fiber. Ukuveliswa kweentambo kuthengiswa ngaphezulu kwe-89 yezigidi zeedola / ngonyaka.
Ukuhlonipha umgaqo "wokufaka izixhobo zetekhnoloji yokuqala, kunye nabaphathi beklasi yokuqala, ukubonelela ngeemveliso zodidi lokuqala kunye nenkonzo kumthengi", iChengdu Datang Communication Cable Co, Ltd. ihambelana ngokungqongqo ne-ISO 9001 Inkqubo yokuqinisekisa umgangatho, i-ISO14001 inkqubo yoqinisekiso lokusingqongileyo kunye ne-ROHS yokufumana ukhuselo lokusingqongileyo. Kusekwe inkqubo engqwabalala yolawulo lwenzululwazi ethe yaphunyezwa ngokungqongqo.
Njengesiseko esivelisayo sokuvelisa intambo, i-Datang Communication Cable ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zefayibha yentambo, intambo ye-coaxial kunye nezixhobo zayo, intambo yolingano kunye nokuxhuma izixhobo zekhabhathi.
I-Datang Communication Cable Co., Ltd. yasekwa ngo-1999 kummandla we-high-tech zone i-Chengdu, egubungela iihektare ezili-150, iindibano zocweyo ezine, kwaye inabasebenzi abangama-400. Nokuba inkampani isekwe kuphela kwiminyaka eli-15, kodwa intambo ye-DTT iye yaqokelela phantse iminyaka engama-50 ye-R & D, kwaye yenza amava kwiintambo zonxibelelwano. Ukuchazwa apha ngezantsi ziziganeko zembali yeDTT Cable.
Ngo-1965: Imvelaphi evela kwi-5th IZiko loPhando lwePosi kunye noNxibelelwano ngomnxeba (owandulelayo we-FH & DT)
Ngo-1987: I-1st intambo yokujonga yase China yenzelwe ngu-5th IZiko loPhando lwePosi kunye noNxibelelwano
Ngo-1998: iDatang Telecom Technology Co., Ltd (DTT) Ikhowudi yesitokhwe kawonkewonke ngama-600168
Ngo-1999: Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd.
Ngo-2017: Ukusekwa kwe-CICT kuthetha ukuba eyona nkampani inkulu yoNxibelelwano yeSizwe e-China yaphuma
Ukuza kuthi ga ngoku: UChengdu Datang, njengeLungu le-CICT, uphuhlisa intengiso yakhe yehlabathi ngokusebenzayo
● Isixhobo semveliso esihambele phambili
● Amava: jolisa kuphando lwentambo kunye nezinto ezintsha ukusukela ngo-1965. Ngaphezulu kweminyaka engama-50 yamava kunye neqela lobuchwephesha lobuchwephesha ekwenzeni intambo.
● Inkqubo yolawulo lwekhwalithi ye-ISO, i-UL, i-ETL kunye nezinye izinto ezininzi zokulawula kunye nezempilo kunye nezokhuseleko.
● Uthungelwano lomkhosi, unomathotholo nomabonakude, ioyile, imvume yokufikelela kuthungelwano ngocingo
● Idrafti kunye nokuqokelelwa kweshumi elininzi labaphathiswa basekhaya kuvavanyo lweshishini lolwazi, ukuqinisekiswa kunye nemigangatho.
● Iimveliso zithunyelwa kumazwe angaphezulu kwama-20 kwihlabathi liphela, elona qabane libambiseneyo labafowunelwa basekhaya.
I-Chengdu Datang yoNxibelelwano lweeCable Co., Ltd. ukunyathela kwengingqi kuyaqhubeka nokwanda, kwaye siye saseka ishishini eSpain, Canada, USA, Belarus, Italy, Laos, India, Indonesia, Vietnam, Kuwait, Brunei, UAE, Saudi Arabia, Ecuador, IMalaysia neThailand.
►Iziko le-R & D kwicingo lokuhambisa i-Wire kunye ne-Cable e-China
►Iyunithi esebenzayo e-China etyunjwe liqela leqela le-ITU-T 6
►Lungu eliPhambili leKomiti yeeNgcingo kunye neekhebula zeZiko lezoNxibelelwano lase China
►Ngaphezulu kwe-100 imigangatho yeshishini lesizwe kunye nelungelo elilodwa lomenzi weemveliso zentambo zonxibelelwano
►Umthengisi ohamba phambili wabasebenzi abathathu baseTshayina
►Iimpawu ezili-10 eziphezulu zenkqubo yeeklabhu ukusukela ngo-2009